nepaldoor.com: अखण्ड नेपाल पहिलो पार्टी बन्दैछ
कुमार खड्का, अध्यक्ष
कुमार खड्का पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चर्चित नाम हो । गत जेठ १३ गते काठमाडांै टँडिखेलमा अखण्ड नेपाल पार्टी घोषणा गरेर नेपाललाई अखण्ड, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र हिन्दुहरुको ८१ प्रतिशत बसोबास भएकै कारण हिन्दु राज्य सापेक्षको नारा लिएर आएको पार्टीका अध्यक्ष खड्का हुन् । इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमीबाट सामाजिक क्षेत्रहुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका खड्कासँग नेपालडोरका लागि सुरेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।
अखण्ड नेपाल पार्टी किन र केका लागि खोल्नु भयो ?
अहिले नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खतरामा छ । बचाउन नसके देश नै नरहने अवस्था देखिन्छ । देश गृह युद्धमा पनि फस्ने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा सचेत नेपाली भएकै नाताले हामीले राष्ट्रियता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावका लागि यो पार्टी स्थापना गरेका हौं । विदेशीलाई जथाभावी नागरिकता वितरण गरिँदैछ, त्यो रोक्नु पर्छ । भ्रष्टचारले जरो गाडेको छ त्यसलाई पनि निमूल पार्ने हाम्रो योजना हो ।
पार्टीले के के गर्दैछ त ?
हामीले गत जेठ १३ गतेमात्र अखण्ड नेपाल पार्टीको घोषणा गरेका हौं । काठमाडौं खुलामञ्चमा झण्डै एक लाख मानिसबीच यो पार्टीको घोषणा भएको हो । हामी अब संगठन विस्तारमा जुटेका छौं । पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । १८ हजार मतदाताको हस्ताक्षरसहित पार्टी ३९ औं दलमा दर्ता भइसक्यो ।
असार १५ सम्म संगठन सृदृढिकरण अभियान चलाएका छौं । यही समयभित्र ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला पार्टी गठन भइसक्नेछ । असार मसान्तभित्र देशका सबै गाविसमा पुग्ने लक्ष्य छ । साउन दोश्रो साताभित्र केन्द्रका विभाग, अञ्चल, राज्य समिति र ५ वटै विकास क्षेत्रमा समितिहरु गठन भइसक्नेछन् ।
तपाइँहरु कस्तो संघीयता चाहनु हुन्छ ?
हामी संघीयताका पक्ष्यमा छौं । जाति, भाषा र धर्मका आधारमा संघ बनाउन हुन्न । भौगोलिक आधारमा हिमाल, पहाड, नदी, तालको नाम राखेर संघीयता बनाउनु पर्छ ।
कति संघ बनाउनु उचित हुन्छ ?
हामीले हालका ५ विकास क्षेत्रलाई ५ प्रान्त र काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरलाई मिलाएर केन्द्रीय प्रान्त बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं ।
आगामी संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हो । पछिल्लो घटनाक्रमले निर्वाचन हुने देखिन्छ । निर्वाचन नगराए विकल्प पनि छैन । अन्तराष्ट्रिय चासोअनुसार प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनेको छ । विदेशी पनि पछिल्लो समय निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले निर्वाचन हुन्छ ।
नेकपा–माओवादीसमेतका दल निर्वाचन विरोधमा छन् नि ?
अब माओवादी र उपेन्द्र यादवको समूहको पार्टीमा निर्वाचन विथोल्ने शक्ति छैन । अन्य दल त नाममात्रका हुन् । सरकारले चाहेमा निर्वाचन हुन्छ । उनीहरु सरकारसँग प्रतिकार गर्ने हैसियतमा छैनन् ।
निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउने अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
हामीलाई सुरुमा प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिकमा राम्रो सिट आउने विश्वास थियो । पछिल्लो समय हामीलाई प्राप्त शुभेच्छा र सद्भावका कारण समानुपातिकमा १ सुय २० र झण्डै त्यतिकै संख्यामा हाम्रो विजय हुन्छ । हामी एकीकृत नेकपा माओवादीसँग पहिलो दल हुनेमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं ।
भनेपछि ठूलो दल बन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
८१ प्रतिशत हिन्दु रहेको देश अनि देशको माया गर्ने ब्राम्हण, क्षत्री, जनजाति, दलितसम्मले हामीलाई साथ दिने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । केही आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्षमा र समानुपातिकमा अखण्ड नेपाललाई मतदान गर्ने भन्दैछन् । यो अवस्थामा हामी सकेसम्म पहिलो नभए दोश्रो ठूलो दल भएर देखाउने छौं ।